Dhibcaha Salaada Ruuxa Adeecida | QODOBADA SALAADA
Qorshaha akhrinta Baybalka
Sabtida, Oktoobar 16, 2021
Gal / biir
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Qodobbada Salaadda ee loogu talagalay Ruuxa addeecidda
Qodobbada Salaadda ee loogu talagalay Ruuxa addeecidda
Maanta waxaan la macaamili doonnaa dhibcaha salaadda ruuxa adeecida. Dad badan ma oga in ficilka adeeciddu tahay nimco ka timid Ilaah. Sidee Samson si adag looga digay inuusan guursan naag ajnabi ah. In kasta oo digniino oo dhan, Samson weli wuxuu go'aansaday inuu la qabsado Delilah oo noqonaysa qof caan ah.
Sheekada Samson waxay ku dhammaatay khatar si fudud maxaa yeelay wuxuu diidey awaamiirta iyo digniinta xagga Eebbe. Sidoo kale nolosheena, waxaa jira waqtiyo kaliya oo aan ubaahanahay inaan sameyno ay tahay kalsooni iyo adeecid. Aynu xisaabta ku darsanno sheekada Boqor Saa'uul. Wuxuu diidey awaamiirtii fududeyd ee uu Samuu'eel siiyey. Halkii uu adeeci lahaa wuxuu allabari u bixiyey Ilaah oo kafaaraggud u ah ficilkiisii ​​caasinimada.
Nebi Samuu'eel wuxuu si aan leexleexad lahayn ugu sheegay in sababta oo ah waxaad diidday codkii Rabbiga oo aadna u hoggaansami weyday waxbaristiisa, in sidoo kale Rabbigu isaga u diiday inuu ahaado Boqor. Buugga 1 Samuu'eel 15: 22-23 Rabbigu miyuu aad ugu farxaa qurbaannada la gubo iyo allabaryosidii aad u addeecday codka Rabbiga? Bal eeg, addeeciddu waa ka wanaagsan tahay allabariga, maqlidduna waa ka wanaagsan tahay baruurta wananka. Waayo, caasinimadu waxay la mid tahay dembiga sixirka, madaxweynuhuna wuxuu la mid yahay xumaanta iyo sanam caabudidda. Waxaad diidday Eraygii Rabbiga, oo isna wuxuu kuu diiday inaad boqor sii ahaatid.
KINDLY DAAWASHO WALBA DAYARAY TVga YOUTUBE
Hadda waad iska qortaa
Waxaan ka dheehan karnaa tuducdan Baybalka ah in Ilaah neceb yahay caasinimada. Wuxuu ka jeclaan lahaa inaan adeecno halkii aan u imaan lahayn inaan raadsado cafis. Layaab ma leh in Eebbe sharfo ereygii Nebi Samuu'eel markii uu ku dhawaaqay dhammaadka boqortooyadii Saa'uul ee ahaa Boqorka Isreal.
Si aan si buuxda u fahamno sida loo tukado, waxaan si dhakhso leh u iftiimin doonnaa qaar ka mid ah raadadka xun ee caasinimada.
Sababta adeecidu Muhiim u tahay
Ficilka caasinimadu wuxuu horjoogsan karaa fulinta barakada Eebbe
Mid ka mid ah siyaabaha cadowgu noogu diidayo helitaanka barakada Eebbe waa ficilka caasinimada. Ujeedada Eebbe ee nolosha Samson waxay ahayd inuu u ahaado gaarsiinta dadka Ilaah. Si kastaba ha noqotee, markii Samson caasiyey Ilaah markuu guursaday dal qalaad, wuxuu la dhintay cadowgiisii ​​iyo ujeeddadii Ilaah ee noloshiisa oo aan la buuxin.
Sidoo kale, carruurta Isreal waxay ku sodcaaleen cidlada afartan sano oo kaliya sababtoo ah waxay diideen inay adeecaan waxbarista Eebbe. Qorshihii Eebbe wuxuu ahaa inay afartan maalmood socdalaan. Caasinimadoodu waxay sii fidisay muujinta ballanqaadkii Ilaah ee noloshooda.
Waxay furaysaa barakada Eebbe
Sidii hore loo sheegay, mararka qaarkood waxa kaliya ee aan u baahanahay waa inaan kaliya aaminno oo adeecno Ilaahay wax walbana ay ku dhici doonaan meesha. Nebi Samuu'eel wuxuu noloshiisa ku dhammayn lahaa sida mid ka mid ah wiilashii Ceelii, laakiin ficilkiisii ​​addeeciddu waxay ka dhigtay ruuxii Ilaah inuu u yimaado isaga. Samuu'eel wuxuu ahaa ilmo dhammaystiran. Xannaah waxay Ilaah u ballanqaadday inay ka dhigi doonto Samuu'eel inuu Ilaah ugu adeego macbudka dhexdiisa.
Samuu'eel wuxuu dooran lahaa inuu ku caasiyoodo amarka Ilaah oo uu noloshiisa ugu noolaado sida ugu fiican wiilasha Ceelii Si kastaba ha noqotee, wuxuu doortay inuu si qalbi furan ugu adeego Eebbe oo Ilaahay uga dhigay nebi weyn reer Isreal.
Waxaan adeecnay Ilaah maxaa yeelay waa waajibkeenna
Waxaan nahay jiilkii kuwa la soo furtay. Kuwii looga yeedhay gudcurka oo galay nuurka cajaa'ibka leh ee Ciise Masiix. Waa waajib na saran inaan adeecno, aaminno oo u adeegno kan ku badbaadiyey dhiigga qaaliga ah ee wiilkiisa si uu nooga dhigo boqorro iyo wadaaddo.
Qorniinku wuxuu leeyahay waa Xorriyadda Masiixu wuu ina xoreeyay, haddaba aynu sidaa aawadeed u istaagno si aynaan mar dambe addoon ugu noqon dembiga. Waa waajib ina saran inaan adeecno ilaahay si aanan mar dambe ugu dhicin shaydaanka.
Rabbi Ciise, waxaan kuugu mahadnaqayaa nimcadaada. Waxaan kugu weyneynayaa hadiyadda ruuxa quduuska ah ee aad na siisay. Waan ku weyneeynayaa nimcada aad na siisay inaan ku garano oo aan kuu adeegno. Rabbiyow magacaaga ha lagu weyneeyo magaca Ciise.
Aabbow Sayidow, Qorniinku wuxuu i fahamsiiyay in addeeciddu ay ka wanaagsan tahay allabariga, oo maqlidduna ay ka wanaagsan tahay baruurta wananka. Aabbo, waxaan kaa baryayaa inaad i siiso ruuxa inaan mar walba u hoggaansamo tilmaamahaaga magaca Ciise.
Rabbi Ciisow, waxaan ka baryayaa inuu ruuxu ka dambeeyo doonistaada. Waxaan ka baryayaa nimcada inay ahaato mid adeecda tilmaamahaaga. Aabbe Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad nimcadan igu siiso magaca Ciise.
Sayidow, waxaan la imid jirrabaadda kasta oo cadawga igu qasbi karo inaan sameeyo wax sida ku jirta doonista jidhka. Waxaan ka soo horjeedaa awood kasta oo jidh oo noloshayda xukunta. Waxaan ku baabi'inayaa dabka ruuxa quduuska ah ee magaca Ciise.
Sayidow, waxaan ka baryayaa nimcada inaannaan u arkin digniintaada iyo tilmaamahaaga inay yihiin wax aad u adag. I sii geesinimo aan u raaco tilmaamahaaga si adag xitaa haddii ay doqon u tahay wajiga dadka.
Qorniinku wuxuu leeyahay waddo dadka ugu qumman laakiin dhamaadka waa halaag. Rabbiyow, ma doonayo inaan naftayda u waayo sheydaanka. Waan diiday inaan lumiyo badbaadadayda khiyaanada cadowga. Waxaan ku baryayaa inaad i siiso nimcada inaan ku istaago jidkaaga. Waxaan ku baryayaa nimcada inay sii taagnaato ilaa imaatinkaaga labaad ee magaca Ciise.
Sayidow, waxaan kaa baryayaa in naxariistaada aawadeed aad bilaabi doontid inaad furto barako kasta oo i hortaagtay ficilkeygii aan ku caasiyey eraygaaga. Waxaan Ilaah ka baryayaa inaad nimcadaada ku siidaynaysid dhammaan barakooyinka magaca Ciise.
Waxaan ka soo horjeedaa khiyaanooyinka xun ee cadawga oo dhan si aan u seego ducadaada noloshayda. Waxaan ku baryayaa ruuxa is-hoosaysiinta dardaarankaaga iyo ujeeddadaada magaca Ciise.
Waxaan ka hor imanayaa awood kasta oo ogaansho Nolosheyda. Nooc kasta oo xannibaad ah ayaa lagu burburiyaa magaca Ciise.
salaadu waxay tilmaamaysaa caasinimada
article PreviousDuco Nabadeed Umada
Next articleQodobbada Salaadda ee Geesinimada
Magacaygu waa Pastor Ikechukwu Chinedum, waxaan ahay nin Ilaah ah, oo aad u jecel dhaqdhaqaaqa Ilaah ee maalmahan u dambeeya. Waxaan aaminsanahay in Ilaah uu awood u siiyey rumayste kasta amarka layaabka leh ee nimcada si uu u muujiyo awoodda Ruuxa Quduuska ah. Waxaan aaminsanahay in Masiixi kasta uusan Ibliisku dulmiyin, waxaan leenahay Awood aan ku noolaano kuna soconno talisnimo iyada oo loo marayo Salaadaha iyo Ereyga. Wixii macluumaad dheeri ah ama la -talin ah, waxaad igala soo xiriiri kartaa chinedumadmob@gmail.com ama Igula sheekeyso WhatsApp iyo Telegram +2347032533703. Sidoo kale waxaan jecelahay inaan kugu casuumo inaad ku biirto Kooxdayada Salaadda ee 24 -ka Awood leh ee Telegram -ka. Guji xiriirkan si aad ugu biirto Hadda, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Allaha ku barakeeyo.
Ducada axdiga oo ka timid Ruuxa Badluck
Ducooyinka Axdiga Dambi Dhaafka
Ducooyinka Axdiga Ee Barakada leh
Abiodun Lawal Agoosto 24, 2021 XXX: 3 pm
Waxaan leenahay cibaadada subaxnimadii hore ee saaka waxayna farriintu ku saabsanayd adeecidda. Wehelnimada ka dib waxaan baaray oo aan helay barxaddaadii aad ku baraysay Ruuxa. Xannibaadda dhicitaanka Masiixiyiinta badan ama fadhiidnimadu waa caasinimo.
Waan bartay dhambaalka wax badanna waan ka bartay. Waxaan rajaynayaa inaan la wadaago ardaydeena subaxnimadii Khamiista 26/82021. Oo weliba u tukada salaadda sida ku qoran. Waxaan bilaabay inaan tukado salaadaha laakiin waxaan gartay inaysan ahayn salaad hal mar ah ee waa mid si joogto ah loo tukanayo.
Allaha barakeeyo Wasaaraddaada.
Tabaruca & Ardayda
Tartanka Dhallinyarada Nigeria.
BETLAADA (Caqabadaha Dadka Waaweyn & Dhalinyarada)
Tel: + 234 7044064924
5 Cawaaqib Xumada
Maalin Kasta Tilmaanta Salaadda
SUBSCRIBE SI AAD UGU HESHO DADKAAGA YOUTUBE CHANNEL
WADA SHAQEEYE MAANTA NAGA SHAQAYSAN OO HA BARNAQEYN
30 Qodobbada Salaadda Sannadka Cusub 2020
30 Habeenkii Salaadda Saqda dhexe
50 Salaadda Dagaallada Qodobbada ka dhanka ah xoogagga mugdiga.
Qorshaha akhrinta Baybalka36
Ku noolaanshaha cibaadada17
dailyprayerguide.com waa websaydh loogu talagalay salaadda. Waxaan aaminsanahay inuu qofka kiristaanka ahi guuleysto, waa in la siiyaa salaadda iyo ereyga Eebbe. Qodobbada salaadda ee ku yaal bartayada internetka waa inay ku hagaan sida aad uga shaqeyso hagaajinta noloshaada salaadda. Waxaan danaynaynaa adeegsadeyaashayada, oo waxaan dooneynaa inaan aragno gacanta Ilaahay oo korkooda saaran asaga oo duceeya. Marka waa lagu soo dhaweynayaa sida aad maanta noogu soo biirtay oo aad noola barido, Ilaaha jawaabta ducooyinka ayaa kugula kulmi doona halka aad u baahantahay magaca Ciise. Ku soo dhowow doonta. Ilaahay ha ku barakeeyo.
Maalinwalbaheega hagida 2019 | Xuquuqda daabacaadu way xifdisan
30 Qodobbada Salaadda ee Ilaalinta iyo Samatabbixinta Carruurteenna
U ducee MAGAALADA MAURITIUS
31 Salaadda Miracle Caawimaad Dhaqaale
Salaadda Nabadda iyo Raaxada